Iimveliso ezigqityiweyo ze-Varicella Vaccine PFS China Manufacturer
Iimveliso ezigqityiweyo ze-Varicella Vaccine PFS,Isitofu sokugonya seVicella,Ixesha elide lokuqinisekiswa ngokuzinzileyo
Changchun BCHT Biotechnology Co. [Jilin,China] Uhlobo lo shishino: Manufacturer Main Mark: Asia Ngaphandle: 1% - 10% ICredit: GMP Inkcazo: Iimveliso ezigqityiweyo ze-Varicella Vaccine PFS,Isitofu sokugonya seVicella,Ixesha elide lokuqinisekiswa ngokuzinzileyo
Home > Imveliso > I-Varicella Vaccine (Live) > Iimveliso ezigqityiweyo > Iimveliso ezigqityiweyo ze-Varicella Vaccine PFS
Iimveliso ezigqityiweyo ze-Varicella Vaccine PFS
 Iimveliso ezigqityiweyo ze-Varicella Vaccine PFS
Umzekelo No.: Pre-filled Syringe
Iimveliso ezigqityiweyo ze-Varicella Vaccine, Live, I-Syringe yangaphambili
Iimveliso ezigqityiweyo zokugonya kwe-varicella. Unempawu ezintathu, ukhuseleko lwe-gelatin , ixesha lokuqinisekisa ngokuzinzileyo, ukukhuselwa kwe- b etter kunye ne-high titer kunye nokusebenza komzimba. Ezi mphuculo zithuthukise ukhuseleko lokugonya kunye nobunjani, kwaye i-BCHT isungulwe isikhundla esiphezulu kwi-vaccine ye-varicella. Kwaye ithunyelwa kwamanye amazwe, njengamaNdiya, ePhilippines.
Kwaye xa kuthelekiswa neenguqulelo zepenicillin, i-syringe ezaliswe ngaphambili ikulungele ukusetyenziswa.
[ Amaqhinga kunye neF F ]
Isitofu senziwa sisasazo se-varicella-zoster virus (i-Oka strain) kwisityalo se-diploid yeseli (MRC-5), emva kokulima kunye nokuvuna, ukunyuswa kwegciwane lesifo sengculaza kulungiswe ukukhutshwa kwegciwane emva kokungqiniswa kwesimo sokuzinzisa esifanelekileyo. Le mveliso ibomhlophe i-pellet iplatey in glass glass. Isigodlo sokugonywa emva kokupheliswa kwendlululo isisombululo esicacileyo ngaphandle kobukho obubonakalayo beengqungquthela zangaphandle.
Isithako esisebenzayo: I-viral varicella-zoster virus (i-Oka strain): engekho ngaphantsi kwe-3.3 lgPFU (2000 PFU)
Izithako ezingasebenzi: I-Trehalose, i-Human Albumin, i-Sodium Glutamate, i- Sucrose, i-Glucose, i- Carbamide,
I-Diluent: Amanzi angamaNtsholongwane
[I zi boniso]
Isitofu sokugonya siboniswe ukugonywa ngokuthe ngqo kwi-varicella yezilwanyana ezinempilo, izilwanyana ezithintekayo ezivela kwiinyanga ezili-12.
[Umsebenzi kunye nokusetyenziswa]
Emva kokugonywa, umzimba we-immuno-umsebenzi we-varicella-zoster virus unokuveliswa ukukhusela umntu e-varicella.
I-vial iqukethe i-0.5 ml yamanzi ngokuchithwa kwesitofu sokugonywa nge-lyophilized with diluent. Isigodlo sokugonywa esinezixhobo eziqukethe i-PF ye-varicella-zoster virus kwaye isetyenziswe kwisifundo esisodwa kwisilinganiso esisodwa.
[Inkqubo ye-immune kunye neeritha]
(1) Umthamo omnye wokugonywa okuyisiseko kubantwana abaneminyaka eyi-1-12 ubudala; Amanyathelo amabini okugonywa okuyisiseko kubantu abaneminyaka engama-13 ubudala nangaphezulu kunye neiveki ezi-4-8 zexesha.
(2) Dlulisa i-diluent ngesirinji kwi-vial ene-vaccine ephilileyo. Gubungela kakuhle ukuqinisekisa ukuchithwa okupheleleyo kweplate ukuze kusetshenziswe kunye nokutshintshela zonke i-liquid back to syringe.
(3) Faka isicelo sokumiswa kwe-0.5 ml ye-injection subcutaneous kwindawo yecala.
Ngokubhekiselele kwingxelo yesifo seengxaki kunye nokubhala kwee-klinikhi zonyango ekhaya nakwamanye amazwe, i-Health Authorities kumgangatho wephondo okanye ngasentla inokwenza i-foster dose eyodwa kubantu abaneminyaka engaphantsi kwe-12 ubudala ngokubhekisele ekubhekeleni kwindyikitya yomhlaba xa kuyimfuneko.
1. Uphando lwekliniki lwasekhaya
(1) Kwilingo lekliniki elibandakanya abantwana abangama-600 kunye nabantwana abaneminyaka engama-1 ukuya ku-12 ubudala abagonywe ngumkhiqizo, iimpembelelo eziphambili ze-systemic zazingumkhuhlane kunye nomlinganiselo we-12%, nceda ubone i-table 1, ngelixa i-systemic reaction reaction, ukhwehlela , ukukhawuleza, ukukhala, ukungazinzi kunye ne-anorexia yenzeka kwi-1-5 yobudala kunye ne-1-10%; Impendulo ephakamileyo yendawo yayiyi-pruritus, ubomvu, ukuvuvukala kunye nentlungu kunye nenani le-5.25%, nceda khangela itafile 2.
Itheyibhile 1 Umkhuhlane kwiminyaka eyi-1-12 ubudala
Itheyibhile 2 Ukusabela kwendawo kwi-1-12 ubudala ubudala
Akukho mfahluko omkhulu phakathi kweqela lokugonya kunye neqela lolawulo kwiThebula 1 no-2.
(2) Kwilingo lekliniki elibandakanya abantu abayi-928 abaneminyaka engama-13 ubudala nangaphezulu ngaphezu kokugonywa ngumkhiqizo, ukulingana kwenani lezinto ezihamba ngayo kwingu-28.76% eyona nto yayingumkhuhlane. I-8.24% eyayibomvu, ukuvuvukala nentlungu, nceda khangela itafile 4.
Itheyibhile 3 Ukuphendulela kwendlela yokusebenza kwiminyaka eyi-13 ubudala nangaphezulu
Itheyibhile 4 Ukusabela kwendawo kwiminyaka eyi-13 ubudala nangaphezulu
Akukho mfahluko omkhulu phakathi kweqela lokugonya kunye neqela lolawulo kwiThebula 3 no-4.
Iziphumo ezingathandekiyo zingacwangciswa ngolu hlobo lulandelayo ngokwemilinganiselo ye-occurence: eziqhelekileyo (≥10%); eziqhelekileyo ( ≥ 1% kunye <10%) ; ngamanye amaxesha ( ≥ 0.1% kunye <1%) ; inqabile ( ≥ 0.01% kunye <0.1%) ; inqabile kakhulu (<0.01%).
Kuhlolisiso lwezonyango lwe-2-dose yokugonywa kwabantu abaneminyaka engama-13 ubudala nangaphezulu kunye nexesha leeveki ezingama-6 ngale mveliso, izigqibo zengingqi kunye nendlela yokusebenza ngayo ebanjwe ngomhla we-42 zilandelayo:
C ommon ukusabela okubi:
(1) Ngokuqhelekileyo kwisithuba seeyure ezingama-24 emva kokugonywa, intlungu kunye ne-haphalgesia zenzeka kwindawo yokuxela, kwiimeko ezininzi, ziya kuphelisa ngokuzenzekelayo.
(2) Ngokuqhelekileyo kwiiveki ezi-1-2 emva kokugonywa, ukuphendulwa komkhuhlane wesikhashana kungenzeka, ngokukhululeka, kwaye kunokukhutshwa ngokuzenzekelayo emva kokugqibela kweentsuku ezingama-1-2 ngaphandle kweyonyango, izigulana zifuna ukuphumla xa ziyimfuneko kwaye zininzi amanzi, zihlala zifudumele xa usulelo lwesibini; ukuba ufikelele kumfiva okanye ixesha lomkhuhlane ngaphezu kweeyure ezingama-48, unokuphathwa ngeendlela eziphathekayo okanye kwiyeza.
(3) I-Rash: ngokuqhelekileyo kwiiyure ezingama-72 emva kokugonywa, i-rashes encinci inokwenzeka, kwimeko apho
unyango olungumqondiso lunganikwa ngokufanelekileyo, kwaye ubude buya kuba ngaphantsi kweentsuku ezimbini.
Impendulo engavamile kakhulu:
(1) Ukuqhaqhazela okuvuthayo: ngokuqhelekileyo kungakapheli iiyure ezingama-72 emva kokugonywa, i-urticaria iyenzeka, xa kwenzeka ukuphendula, ubone ugqirha ngexesha elifanelekileyo kwaye uthathe unyango olwenziwe lukhuseleko.
(2) Ukutshatyalaliswa kwamanzi: ngokuqhelekileyo kwenzeke ngeyure eli-1 emva kokugonywa. Ukujova kwe-epinephrine kunye nezinye iindlela zokongxamiseko ziya kwenziwa njengonyango ngexesha elifanelekileyo.
(3) I-purpura ye-allergic: xa kwenzeka ukutshatyalaliswa kwe-purpura ye-allergen, kufuneka ubone udokotela ngexesha elifanelekileyo kwaye i-cortical steroids iya kulawulwa njengonyango oluchasayo, ukuba lugcinwe ngokufanelekileyo okanye ngexesha elifanelekileyo, i-purpura nephritis ingaqhuma ngexesha elinye.
(1) Iigxina ezine-hypersensitivity ezaziwayo kunoma yimuphi umbandela walo mveliso kuquka neomycin.
(2) Abafazi ngexesha lokukhulelwa.
(3) Izifundo ezijongene nezifo ezinzima, izifo ezingapheliyo, iziqhamo ezinzima zezifo ezingapheliyo, umkhuhlane kunye naziphi na izifo ezikhuselweyo ze-immune.
(4) Izifundo ezinokukhubazeka kwe-immune, immunocompromise okanye ukufumana unyango lwe-immunosuppression.
(5) Izifundo ezinomdla owaziwayo wesifo sokugonywa ngumzimba okanye ukuba uthinteke kakhulu nelungu lentsapho elinomlando wesi sifo.
(6) Izifundo ezijongene ne-cerebropathy kunye nokuhluthwa okungalawulwayo kunye nezinye izifo zesifo segazi
(7) Gweba ukusebenzisa i-salicylate kwiiveki ezingama-6 emva kokugonywa kwalo mveliso.
(1) Izigulane kwezi zilandelayo zimele zisebenzise ngokuzenzekelayo: umntu okanye intsapho yomntu unomlando wokuxubha, izigulane eziphethwe zizifo ezingapheliyo, imbali yokuhluthwa, izigulane ezinomdla wokuqhaqhaqhaqhaqha, abafazi abaselwandle.
(2) Iigxina ezifakwe ngeemveliso kufuneka zigcinwe ubuncinane imizuzu engama-30 kwindawo. U-Epinephrine kunye nezinye iziyobisi kufuneka zilungiselelwe ukusetyenziswa ngokukhawulezileyo xa kwenzeka ukuphazamiseka okuthe xaxa.
(3) Ukutshatyalaliswa kwegciwane lesigonyo kuphela kuvela kwiimeko ezinqabileyo kakhulu. Zonke izigulana ezinokuhlakulela i-varicella, ngokukodwa izigulane ezijongene nokuxhatshazwa kwemizimba emibini ukuya kwiiveki ezintathu emva kokugonywa, kufuneka ziphephe ukudibanisa nezigulane ezinobomi be-leukemia okanye abafumana unyango olungakhuselekanga, okanye abafazi abakhulelweyo ngokukodwa kwiinyanga ezintathu zokuqala zokukhulelwa.
(4) Ukulawulwa ngaphantsi, kungekho ngaphakathi kwe-intradermally kwaye akuzange nanini, phantsi kwayo nayiphi na imeko, nge-intravenously.
(5) Gweba nayiphina i-disinfectant ukuba uqhagamshelane nesitofu sokukhusela le mveliso ngexesha lokuvula izigulane zokugonya kunye nokuthwala i-injection. Utywala kunye naliphi na i-disinfectants inokuthi ingasebenzi kwisifo sengcinezelo esichengileyo, ngoko kufuneka ugonyelwe ukusetyenziswa emva kokuqinisekisa ukukhupha okupheleleyo kwe-disinfectant kude nekhumba.
(6) Ukuba kukho iimeko eziqhelekanga zokubonakala, ezifana nesibhakabhaka esiqhekezayo, i-label yeblasi okanye ukulahlekelwa ngempumelelo, ukuphazamiseka okwenzeka emva kokuchithwa, njl, i-injection ayiyi kulawulwa.
(7) I-vaccine yale mveliso kufuneka ilawulwe ngokukhawuleza xa ivula izitya zokugonya; kwiimeko ezizodwa, isitofu sokugonya singafakwa kwi-2-8 ℃, kwaye kufuneka isetyenziswe kwisithuba semaminithi engama-30, isitofu sokugonywa kwesigxina kufuneka sigxothwe.
(8) Abasetyhini abaneminyaka yobudala abanokuzala abantwana banokugonywa kuphela ukuba amanyathelo athathwe ngokufanelekileyo athatyathwa ubuncinane kwiinyanga ezintathu emva kokugonywa.
(9) Ulawulo lwezinye izitofu zokugonywa kufuneka zigcine ubuncinci bexesha elilodwa emva kokugonywa kwesi sigxina semveliso; Nangona kunjalo, esi sigxina semveliso sinokulawulwa ngexesha elifanayo kunye neentsholongwane ezithintekayo zokugonywa kwemaselisi, i-rubella kunye nama-mumps.
(10) Ukukhutshwa kwefriji akuvumelekile.
Ukugcinwa kunye nokuthuthwa ngekhendi ebandayo ebumnyameni phakathi ko-2-8 ℃.
I-white fluey pellet ye-vaccine ye-lyophilized is in one 2ml flagrant made of glass borosilicate.
1 isibalo / umthamo womntu × 1 idosi yomntu / ibhokisi (kunye nesitya esisodwa okanye esinye sirityu ekhethiweyo yamanzi oyinyumba).
[Ixesha lokuqinisekisa] 36 iinyanga.
[Umgangatho wokuvelisa] I-Pharmacopoeia yeRiphabhliki Yabantu baseChina (2015 Volume III), kunye neMigangatho yokuBhaliswa kwemveliso.
Iimveliso ezigqityiweyo ze-Varicella Vaccine Live Qhagamshelana Ngoku
Iimveliso ezigqityiweyo zeVicic vaccine Qhagamshelana Ngoku
Isitofu seNkukhu Qhagamshelana Ngoku
Iimveliso ezigqityiweyo zentsholongwane ye-Chicken Pox Qhagamshelana Ngoku
I-PFS Inkukhu yePox Pox Qhagamshelana Ngoku
Chicken Pox Vaccine Finished Product Qhagamshelana Ngoku
I-Pox Vaccine PS Qhagamshelana Ngoku
Uluhlu lweMveliso ezinxulumene noko: Iimveliso ezigqityiweyo ze-Varicella Vaccine PFS , Isitofu sokugonya seVicella , Ixesha elide lokuqinisekiswa ngokuzinzileyo , Iimveliso ezigqityiweyo ze-Varicella Vaccine , Iimveliso ezigqityiweyo ze-Rabies Vaccine , Iimveliso eziqingqiweyo zeRabies Vaccine , Iimveliso ezigqityiweyo zeBiopharmaceutical Long , Iimveliso ezigqityiweyo eziphezulu zeTiter Vaccination